Creative Writing » ပြန်တူးမိခြင်းများ…	10
သများရဲ့ အတိတ်ကအရိပ်တွေကို လက်ဖက်ရည်ပိုစ့်တစ်ခု ဖဘမယ်တင်ပြီး ဆွတယ်…။ လမ်းမီးတိုင်မလင်းတလင်းအောက်မှာ သစ်သားခုံပုလေးတွေနဲ့ ထိုင်ပြီး လက်ဖက်ရည်သောက်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးမြို့ညတွေကို အတော်လွမ်းသွားပြီ..။
အဖေနဲ့ ညဘက်ဆို ဆိုင်ကယ်တစ်ယောက်တစ်စီးစီ စီးပြီး မြို့လယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နား လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ် ခုံပုလေးတွေခင်းထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သွားသွားထိုင်ဖြစ်ခဲ့တာ…။ ရာသီအေးအေးမှာ..ဆိုင်ကယ်လေတိုးဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင် အ၀တ်ထူထူတွေဝတ်ထားရင်း..၊ အေးနေတဲ့လက်တွေကို လက်ဖက်ရည်ခွက်ပူပူလေးကိုင်ပြီး နွေးအောင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အရသာ.. အခုပြန်ရှာချင်ရင်တောင် မရနိုင်တော့ပါ… အဲ့ဒီခေတ်က သီချင်းခွေတစ်ခွေ ပေါက်တယ်မပေါက်တယ်ဆိုတာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၃ဆိုင်လောက်ထိုင်ရင်ကို စနည်းနာလို့ရနေတဲ့ခေတ်ရယ်…
Kaung Kin Pyar says: မမဂျီးပြောမှ မိန်းခေးရန်သူလဲ များခဲ့ဖူးလိမ့်မယ်ထင့်…။ ငယ်ငယ်က ကိုယ့်ကိုချစ်တာနဲ့ မုန်းတာ.. ၂မျိုးပဲ ကြုံခဲ့တာရယ်…အလယ်အလတ်ရယ်လို့ မရှိခဲ့ဖူး…
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ယဉ်ကျေးမှုတော့ ဒီမယ် မရှိနေတော့…. တခါတလေ.. ရန်ကုန်မြို့ကြီးကနေ နယ်ပြန်ပြေးချင်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုအရသာတွေ ပြန်လိုချင်လာလို့ရယ်…။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ပီယဆေးနဲ့ ယက္ခဆေး – ဒီစာလုံးမှတ်ထားဦးမှ။ အဲဒါ မသိဘူး။ နောက်လိုအပ်ရင် ဘာသာပြန်စာအုပ်ထဲ ထည့်သုံးမယ်နော် အဟီး။
Mike says: လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေတော့ရှိသေးပေမဲ့သီချင်းမဖွင့်တော့ဘူး…တီဗွီနဲ့စကိုင်းနက်ကလာတာတွေပြနေတော့တာ…လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတူထိုင်ကြပြန်တော့ လည်းအသီးသီးက ဖုန်းပွတ်ကြပြန်ရော…စကားပြောတာနည်းကုန်တယ်…
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ် ဦးမိုက်..
alinsett says: ကကပ သာ— ဟိုအစ်မကြီးလို ကြောင်လျှောက် လျှောက်တာမြင်သွားရင်
Kaung Kin Pyar says: အဟေးး ဟေးးးး နာက ကြောင်လျှောက်ထက် ဆင်မယဉ်သာအဖြစ်နဲ့ကတောင် ပိုနီးစပ်အူးမယ်….
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: ဟုတ်ပ့
Kaung Kin Pyar says: ဒါကတော့ အူးလေးမြောက်ပိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်လို့ ဒီအပိုင်းကို တင်စက်ဖို့ကတော့ အူးလေးမြောက်တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းပါ
ဦးကြောင်ကြီး says: ကင်းကောင်ဘီလူးနဲ့ ဟိုးအနပ်စုန်းတူးပီး အဝှီဈိထိ ခြစ်ပွဲဝံချဉ်သယ်..